Afrika Atsimo : Inona no mety hangatahanao amin’Andriamanitra raha afaka manao izany ianao? · Global Voices teny Malagasy
Afrika Atsimo : Inona no mety hangatahanao amin'Andriamanitra raha afaka manao izany ianao?
Voadika ny 27 Jolay 2010 11:40 GMT
Vakio amin'ny teny 简体中文, 繁體中文, Français, Español, русский, বাংলা, English
Ny masoandro ao ambadik'ireo rahona, avy amin' i Dan A'Vard
Tamin'ny herinandro lasa, nanontany ny olona tamin'ny “aterineto” ny mpitoraka bilaogy Afrikana Tatsimo Khaya Dhlanga hoe inona no mety hangatahan'izy ireo amin’ Andriamanitra raha lazainy fa afaka mangataka aminy izay rehetra tiany izy ireo.
Namoaka ireo fanontaniana sasany avy amin'ireo mpamaky izy :
Nankarary, nampihomehy, nampihetsi-po ireo fanontaniana, ary ny sasany aza dia adala be fotsiny izao, izay samy ankafizina daholo mazava ho azy. Nahaliana ireo fanontaniana, valiny/tsikera. Ireto ny lisitr'ireo fanontaniana mahavariana :
Inona ny tsiambaratelon'ny fandrahoan-tsakafon'ny KFC.
AIZA NO MIAFINA NY FOLO ARIVO TAPITRISA RAND-KO ?
Rahoviana ny farandroko eto ambonin'ny tany ry Tompo malala ?
Handeha ho any aminy fotsiny aho dia handinika azy tsara sy hanontany azy. Nahoana? *Mihevitra aho fa mahasolo ireo fanontaniana rehetra ilaiko valiny io* NAHOANA?
Nahoana no nataony tia mifamono be toy izao ny olona maintihoditra
Fa maninona ianao no tsy manana “hotline” miasa 24ora tahaka an'i Zuma [Filohan'ny Afrika Atsimo ]
Fa maninona izy no mampiditra olona amin'ny fiainantsika, mampiaina antsika ireny fihetseham-po rehetra ireny dia avy eo maka azy ireo indray… Ary maninona no atao sarotra toy izao ny fiainana.
Hangataka aminy ny hamerenena ny fotoana aho satria tsy tokony ho voafitaky ny bibilava i Eva ary hitsangana eo anatrehany i Adama ka tsy hamela azy handika ireo torolalana nomen'Andriamanitra ary tsy hiaraka aminy handika izany koa.
AIZA MARINA IANAO NO MIPETRAKA ARY FIRY NY LAHARAN-TARIBY ANAO?
Iza no Andriamanitra ?
Nahoana aloha ianao no nanamboatra olombelona raha ohatra fantatrao fa higafy izy ireo? Sady tsy tompon'andraikitra amin'ny ankamaroan'ny fahasarotam-piainana eto ambonin'ny tany ve izahay? Nandoto tontolo iainana, namorona fitaovam-piadiana sy baomba, fanavakavaham-bolon-koditra, fankahalana ireo tera-tany vahiny, sns …. nefa dia mbola tsy vonona ny handray andraikitra amin'ireo fihetsikay izahay, fa aleonay indray aza mifanome tsiny.
Ary ny lisitr'ireo fanontaniana avy amin'ireo mpampiasa Twitter :
Andriamanitra, mpananihany ianao, fa maninona ianao no nanamboatra ireo mpamorona? Misy isa enjehinao amin'ny fanamboarana adala angaha?
Maninona ny zavatra marina foana no sarotra atao indrindra…
“Iza no namorona anao ?”
Fa maninona ianao no nanamboatra an'i Julius Malema? [Mpanao politika mpanohitra ao Afrika Atsimo sady Filohan'ny Ligin'ny Tanora amin'ny Kongresy Nasionaly Afrikana.]
Fa maninona ianao no tsy tia ny blk ppl? [Olona maintihoditra ]
Inona no Ataony rehefa maka aina Izy … Toa tena sahirana be izany izy !
Afaka ataonao mamadika ny rano ho divay koa ve aho?
Nahazo ny laharana voalohany tamin'ny Olom-pirenena Mpanao Gazety Raitra an'i Afrika tamin'ny taona 2008 i Khaya Dlanga tamin'ny fitondrana rivo-baovao amin'ny fampiasana ny aterineto, tao amin'ny fivoriam-be tao Afrika Highway ary isan'ny iray amin'ireo olona 100 mpandresy lahatra indrindra izy tamin'ny Fanentanana, ny Haino aman-jery sy ny Varotra 2008 – fanao isan-taona.